FHA home loans for bad credit // Blackburn Investments
You are here: Home / Fha Reverse Mortgage / FHA home loans for bad credit
Fha home loans for bad credit April 15, 2013 – 02:33 pm
Natomboka omaly ilay tetikasa fanamboarana ny tohatohabaton’Ambondrona sy Antaninarenina. Tetikasa izay an’ny Filohan’ny Tetezamita madiodio. « 180 taona lasa no nanamboarana ity tohatohabato ity. Lalana falehan’ny mpanjaka tamin’izany ary rehefa mponina eto an-drenivohitra ihany koa tsy nisy izay tsy mpandalo eto. Manan-karena ny Malagasy ary rariny raha atao tsara amin’ny vato granita izany tohatra izany. Vola avy amiko manokana no hanaovana izany ho fanomezana hatolotra ny mponin’Antananarivo », hoy i Andry Rajoelina.
Ny orinasa Colas no hanatontosa ny asa. « Valo herinandro no hamitana ny tohatohabato roa. Amin’ny 8 marsa no ho vita izany », hoy ny tale iray avy amin’ny Colas.
« Betsaka ny zava-bita teto an-drenivohitra. Isan’ireny ny fitsinjovana ny mponina, na ireo mpandeha an-tongotra izay manodidina ny 75%-n’ny mponina, na ireo mpandeha fiara. Tafiditra ao anatin’ny famerenana ny hasin’ny tanàna sy ny mponina izany », hoy Razafindravahy Edgard, Pds-n’Antananarivo omaly, raha naneho ny fankasitrahany ity tetikasa ity.
Miara-dalana amin’izao asa izao rahateo ny fanentanan’ny kaominina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra mba hiroso amin’ny matihanina, toy ny fampiasana ny toeram-pivarotana miendrika trano na « mobilier urbain ». « Mba hahatsara endrika ny tanàna sady hanintona mpanjifa no tanjona », hoy ny kapiteny Razafimahefa Jocelyn, lefitry ny tale kabinetran’ny Cua.
FHA Loans - Bad Credit Mortgage …
Mortgages will be harder to get in 2014 — STLtoday.com
The Federal Housing Finance Agency forced Fannie Mae and Freddie Mac to raise the fees they charge to guarantee mortgages. ..